Turjubaanada afqaanka oo laga yaabo in magangelyo laga siiyo Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Turjubaanada afqaanka oo laga yaabo in magangelyo laga siiyo Iswiidhen
La daabacay torsdag 18 juli 2013 kl 10.55
Sawirle: Scanpix. Sawirqaabeyn: Swedish Radio.
Waxaa laga yaabaa in turjubaanada la shaqeeya ciidamada iswiidhishka ee ku sugan Afqaanistaan laga siiyo Iswiidhen magangelyo siyaasadeed. Taasina waa habka keli ah oo xallin karo arrinta turjubaanadaas oo hadda ku nool cabsi joogto ah ammaandarrada Afqaanistaan ka jirta awgeed. Sidaasna waxaa laga soo xigtay koox-hawleed ka socda hoggaanka gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibedda iyo hay’adda socdaalka.
- Waxaa looga gol leeyahay in dadkaan turjubaanada magangelyo laga siiyo Iswiidhen maadaama aysan suurta gal ahayn in ay shaqo ka helaan Afqaanistaan xaalladoodu ammaandarrada ah awgeed, ayuu yiri Fredrik Bengtsson oo Hay’adda Socdaalka u qaabbilsan arrimaha saxaafadaha.
Kooxdaas loo xilsaaray waxay si qorodheer oo waqti dheer qaadatay uga xaajoodeen wixii laga yeeli lahaa xaaladda 30ka turjubaan oo sanooyinka badan la shaqeynayey askarta iswiidhishka ee Afqaanistaan ku sugan. Waxaa laga cabsiqabaa in marka askarta iswiidhishku ka soo baxaan Afqaanistaan ay jabhadda talibaanku bilaabaan in ay ugaasadaan oo ka aarsadaan turjubaanadaas.
Kuwo badan oo turjubaanadaas ka mid ayaa horay Iswiidhen uga codsaday magangelyo laakiin codsiyadoodii gacanta ayaa lagu saariyey iyadoo sabab looga dhigayey in qofka magangelyo codsanaaya uu dalka soo galo marka hore.
Kooxdaan loo xilsaaray baaritaanka xaaladda turjubaanada afqaanka ah waxay isla garteen in turjubaanadaasi ay hadda ku sugan yihiin xaalad halis ah oo khasbeysa in loo aqoonsado in ay ka mid noqdaan qaxootiga Iswiidhen soo qaadato. Arrintooda waxaa lagu baarayaa Afqaanistaan gudaheeda, halkaas oo sharciga degganaanshahana lagu siin doono.
Mar Fredrik Bengtsson wax laga weyddiiyey arrintaan wuxuu yiri:
- Ma doonayo in aan arrinta hoos u gudagalo maadaama ay carqalad gelin karto shaqada hadda Afqaanistaan ka socota. Marnaba kama hadalno arrin sidaan oo kale annagoo tixgelineynna ammaanka dadka ay khuseyso.
Dhanka kale hoggaanka gaashaandhigga ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay xalkaan la gaarey. Anders Silwer oo madaxa hawlfulinta militeriga ayaa sheegay in xalka ugu wanaagsani yahay in turjubaanadaas fursad looga sameeyo Afqaanistaan gudaheeda, sida barnaamijyo xirfad-sameyn:
- Bal marka hore in laga caawino sidii ay shaqooyin kale uga heli lahaayeen Afqaanistaan gudaheeda. Haddii taas la waayana loo wareejiyo qaybo kale oo Afqaanistaan ka tirsan oo waxbarasho ama shaqooyin looga sii diyaariyey. Sidaasna waxaa yiri Anders Silwer oo ka socda hoggaanka gaashaandhigga.